ကဗျာရွတ်လို့ ထကြစို့ | ZAYYA
← Ode to Joy ကို ပြန်ဆိုကြည့်ခြင်း
သူရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ မရယ် →
ကဗျာတွေ ရွတ်ဆိုလို့ နိုးထလာချိန်က စရမယ်။
မြက်ခင်း အဖျား အနားတွေဟာ သူ့ကဗျာသံကြောင့် မြူးထူး ကခုန်နေကြတယ်။ သူတို့က သူတို့ အပါး ကပ်မြှူနေကြတဲ့ နှင်းမှုန်စလေးတွေကို တပျော်တပါး ခါယမ်းကြလိမ့်မယ်။ ခါယမ်းခံရတဲ့ သူတို့တွေ တဝေးဝေး တဝါးဝါး ခုန်ဆင်းသွားကြမှာပဲ။ ပြုံးရယ်ရင်း ကြိုလင့်နေတဲ့ မြေလွှာပြင်ပေါ်မှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရသွားကြမှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ လောကဟာ ဂီတသံတွေကြား၊ ကဗျာတေးချင်းတွေကြားမှာ ချစ်ခြင်းတရားကို ဒလဟော ဖြန့်ဝေနေကြတယ်လို့ အလိုလို ခံစားမိလာကြမှာပါပဲ။
တကယ်တမ်း လောကမှာ စစ်မက်တွေ မရှိဘူး ဆိုရင်၊
တကယ်တမ်း လောကမှာ ခိုက်ရန်တွေ မရှိဘူး ဆိုရင်၊
တကယ်တမ်း လောကမှာ အမနာပ အတင်းအဖျဉ်းတွေ မရှိကြတော့ဘူး ဆိုရင်
လူသားတွေလည်း ဒီကဗျာသံကို ကြားရမှာ။
လူသားတွေလည်း တဝေးဝေး တဝါးဝါး ကခုန်ပျော်မြူးနေကြမှာ။
တကယ်တမ်း လောကမှာ အချစ်ခံလိုစိတ်တွေ မရှိကြဘူး ဆိုရင်၊
တကယ်တမ်း လောကမှာ မလိုအပ်တဲ့ သိမ်းယူမှုတွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်၊
တကယ်တမ်း လောကမှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ မရှိကြဘူး ဆိုရင်
ပြုံးရယ်ရင်း ကြိုလင့်နေတဲ့ မြေလွှာပြင်မှာ အားလုံး လွတ်လပ် ကြည်လင်စွာနဲ့ ကူးခတ် ရှင်သန်နေကြမှာ။
တကယ်တမ်းသာ လောကမှာ ချစ်ခြင်းတရားတွေကိုသာ ဖြန့်ဝေနေကြရင်၊
တကယ်တမ်း လောက ကောင်းကင်မှာ သက်ပြင်းတွေ မပါတဲ့ ရယ်မောသံတွေသာ ပျံ့လွင့်နေကြရင်၊
တကယ်တမ်း လောကမှာ မျက်နှာဖုံးတွေ မပါ၊ ပကတိ ဖြူစင် ရိုးသားနေကြရင်….
လောလောဆယ်မှာ ဒီရုပ်ရှင်ပြကွက်အတွက် ကျနော့ရဲ့ မင်းသမီးဟာ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်နေဆဲပဲ။ နေရောင်လွှလွှ အလင်းရောင်အောက်မှာ သူ ထိုင်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ကိုင် ကြေးမုံက အလင်းနဲ့၊ သူ့ခြေကျင်းဝတ် ဆီက ငွေရောင် တစ်လက်လက်ဟာ ငေးမောနေမိတဲ့ ကျနော့မျက်ဝန်းဆီ လာလာ ကျီစယ်နေကြသေးတယ်။
Once uponatime in Love.
With My Beloved Ma, Lin Lin Latt
Jan 7th 2015 at 9:30 PM
Filed under mood, poem Tagged with ကဗျာ, မင်းသမီး, mood, poem, wake up
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကြောင်စီစီနိုင်ရခြင်း အကြောင်း
ဧဝံမေသုတံ ( ကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ )